Manohitra An’i Robertson Izao Tontolo Izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jolay 2017 13:36 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2005)
Tao anatin'ny lahateny erantany mikasika ireo fanamarihan'i Pat Robertson , Amerikana evanjelisitra mpitory filazantsara amin'ny fahitalavitra, miantso famonoana ny Filoha Venezoeliàna Hugo Chavez (izay nialàny tsiny taty aoriana), maro ny fandinihana mikasika ireo fanaovana mahery fihetsika ara-pinoana – sy ny fandeferana be loatra omena azy io any amin'ireo firenena maro isankarazany.
Melohin'i Calvin Ng, Maleziana Kristianina iray ho “Adala Andriamatoa Robertson ” saingy avy eo fintininy hoe: “Ny fanambiko amin'ireo silamo mpanoratra bilaogy dia ny mba hiteny mafy mitovy amin'izany hoe mbola diso fijoro ireo Mullahs Adalan'izy ireo”
Araka ny nanoratan'i Haitham azy tao anaty biloagy tamin'ny 25 Aogositra 2008 ho an'ity fibangoana bilaogy ity, naneho hevitra ny ankamaroan'ireo bilaogera avy any Afovoany-Atsinanana. Tsy nihontsona akory ny Kuwaiti Online tamin'ny tsikera malefaka nataon'ny governemanta Amerikana mikasika an’ Robertson.
Manoratra ao amin'ny Point of View i Harini Calamur, indiana mpanao bilaogy, hoe: “Rehefa nitaky ny lohan'i Bush sy Blair i Osama – mpampihorohoro masiaka izy. … Manintona kokoa ny hahita ny Fitondran'i Bush mitondra fitoriana an'i Robertson mikasika ny ‘famporisihana fampihorohoroana’ .” (Avy amin'ny Blaogy Sabbah.)
Mandoatra ireo resabe sasantsasany taloha mankahàla ny Hindou nataon'i Robertson i Arnab , teratany Indiana mpanao blaogy monina ao Amerika, ankoatra ireo zavatra hafa.
Jewels in the Jungle (Firavaka Any an'Ala) izay miblaogy mikasika an'i Afrika avy ao Alemaina, manana fanangonana iray lavabe ary manontany hoe: “Ahoana ny mikasika ireo lalàna vaovao rehetra fanoherana ny fampihorohoroana lany tao amin'ny Kongresy tamin'ny taona lasa?” Tsy karazana zavatra manohitra ny lalàna ao Amerika ve io? Tsipihan'i Jewels koa ilay adihevitra mikasika ireo fifamatorana misy eo amin'i Robertson sy Charles Taylor, Liberiana mpanao didy jadona.
The Devil's Excrement – Ny tain'ny devoly, izay tsy mpankafy an'i Chavez velively, mihevitra fa voatsoaka manontolo ny momba an'i Robertson rehetra sady tsy mendrika azy akory ny fifantohan-tsaina azon'izy io tao amin'ny tontolon'ny blaogy. Mihevitra izy fa nanao zavatra tsara ny governemanta Venezoelana tamin'ny fampitsimbadihana ireo fanamarihan'i Robertson ho toy ny tsikera mavaivay.
Nanaraka ireo fanehoankevitra avy amin'ny faritra Amerika-Latina tao anatin'ireo fitetezany lahatsoratra isan'andro eto, eto ary eto, i David Sasaki
Ahoana ny hevitrao? Mihevitra ve ianao fa ny tantaran'i Robertson dia nahasarika saina marobe sa nanana lanjany midadasika kokoa izy io rehefa ny fomba fahitàna an'i Amerika eto amin'izao tontolo izao no resahana? Azafady mametraha tsikera iray ary ampahafantaro anay ireo eritreritrareo.
“Nisedra sakana maro aho...Sarotra be ny milaza amin’ny olona eto Alzeria fa Kristiana aho.”
"Ny fotoana nanambaràna ilay lalàna, niaraka amin'ny hoe tsy ho ela intsony ny fifidianana izay ho filoham-pirenena, dia nahatonga ny maro hanontany tena momba ny tanjon'ny fanapahankevitra tahaka iray tahaka izao."